Kanye West Anoti Achakwikwidza Kuve Mutungamiri weAmerica Muna 2020
Muimbi ane mukurumbira pasi pose, Kanye West, azivisa kuti arikuzokwikwidza kuve mutungamiri we America gore rino, 2020.
Vazhinji vari kuseka vachiti kurota kuri kuitwa naKanye asi vanoongorora zvemitambo vakazvimirira, VaTafadzwa Munjanja, vanoti Kanye haasi iye muimbi kana ‘actor’ wekutanga akapinda mune zvematongerwo enyika, vachiti VaRonald Reagan vaive mumafirimu mazhinji vasati vakwikwidza kuve mutungamiri wenyika, izvo vakazove kwemakore masere.
VaMunjanja vanoti umwe aiita zvemitambo yekusimudza masimbi uye akaonekwavo mumafirimu mazhinji, VaArnold Schwarzenegger, vakapindavo mune zvematongerwo enyika vakaita ghavhuna vedunhu reCalifornia kwemakore masere.
VaMunjanja vanoti Kanye akakwikwidza, achaita dambudziko nevanhu vechitema pamusoro pekutsigira kwake mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, vachitizve iyi inogonavo kuva nzira yekuda kubatsira VaTrump kuti pamwe vanhu vechitema vanofanirwa kuvhotera VaJoe Biden vavhotere Kanye kuti VaTrump vabudirire.
Pamusoro pezvo, VaMunjanja vanoti iyizve inogona kuva nzira yaKanye yekukonzera mutauro kuti dambarefu rake, iro richabudiswa mwedzi unouya, waNyamavhuvhu, rigotengwa zvine mutsindo.
Derek Chauvin Anowakikwa Aine Mhosva yeKuuraya VaGeorge Floyd
Derek Chauvin achisungwa kuti aendeswe kujeri mushure mekuwanikwa aine mhosva yekuuraya George Floyd
Aimbove mnupurisa wechichenamudunhu reMinnesota, muAmeria, Derek Chauvin, akawanikwa aine mhosva yekuuraya VaGeorge Floyd gore rapera, 2020.
Chauvin, uyo akadzingwa basa gore rapera, akange ari mupurisa paakauraya VaFloyd, murume wechitema, nekumutsimbirira pamutsipa wake nebvi rake kusvika afa zvikakonzera mhirizhonga muAmerica nemudzimwe nyika.
Nezuro dare redzimhosva rakawana Chauvin aine mhosva nhatu dzekuuraya VaFloyd.
Pakaziviswa kuti Chauvin akange awanikwa aine mhosva ye kuuraya Va Floyd, mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vakafonera mhuri yaVaFloyd vachiti vanotambira zvakabuda mudare redzimhosva nekuti zvinoratidza kuti mitemo ye nyika inoshanda.
Asi VaBiden vakazoudza vatori venhau kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukupedza rusarura ganda muAmerica, vachiti zvabuda mudare redzimhosva izvi hazvina kukwana naizvozvo nyika inofanirwa kuenderera mberi mukurwisana ne zverusarura ganda.
Biden Post Chauvin Conviction
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vachishanda mudunhu reTexas, VaKennedy Masiye, vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kuna Chauvin zvinoratidza kuti mitemo ye muAmerica inoshanda.
Vati kune dzimwe nyika, mapurisa haapomerwi mhosva kunyange vakapara mhosva.
VaMasiye vati kufona kwaitwa naVaBiden kumhuri yaVaFloyd chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika anonzwisisa zvinorwadza vanhu.
Vati VaBiden havana kuita izvi kuti vaonererwe sezvo vakagara vachikurudzira kupedzwa kwerusarura ganda kwemakore mazhinji.
VaMasiye vatiwo kutongwa kwaChauvin kwakafambiswa zvakanaka, vachiti, sagweta, vanogutsikana nekutevedzwa kwakaitwa mutemo nemativi ose.
Kubvumbi 19, 2021
Huwandu Hwevanhu Vari Kupfurwa Vachifa Huri Kuwedzera muAmerica
Vanhu vachikurudzira kudzikwa kwe mitemo yepfuti
Kubva kutanga kwegore rino vanhu vafa vachipfurwa muAmerica vadarika zana rine makumi mana nevanomwe.
Vanhu ava vakapfurwa munzvimbo makumi mana nenomwe mumaguta akasiyana siyana.
Kubva musi wa 16 Kurume apo pakapfurwa vanhu vasere muguta reAtlanta, America yaona vanhu vachipfurwa munzvimbo dzinoita makumi mana nesere.
Nemusi weChishanu chapfuura, vanhu vakapfurwa munzvimbo nhatu dzinoti Indianapolis (Indiana), Pensacola (Florida) ne muWasgington D.C.
Nemusi weSvondo, masikati, mapurisa muguta reAustin, mudunhu reTexas, vakange vachitsvaka umwe murume aimbove mupurisa mushure mekunge apfura vanhu vatatu vakafa.
Sangano rinoongorora mhosva dzinoparwa nepfuti, reGun Violence Archive, rinoti kusvika parizvino mugore rino ra 2021, vanhu vapfurwa munzvimbo dzinoita zana nemakumi mana nesere.
Nyanzvi mune zvehutano, Doctor Frenk Guni, vanoti tsika dzevanhu vemu America dzakasiyana nedzinoonekwa ku Africa, Asia kana kune dzimwe nzvimbo.
Vanoti vanhu vemu America vanoita sevasingakoshesi hupenyu sezvinotwa munyika dzakaita se Zimbabwe.
Kubvumbi 07, 2021
Zvirongwa zveStudio7 Shona neStudio7 Ndebele Zvinosvitsa Makore Gumi neMasere
Veruzhinji vari kurumbidza nhepfenyuro yeStudio7 nekusvitsa kwayaita nhasi makore gumi nemasere ichitepfenyura zvirongwa zveShona neNdebele, mushure mekung chirongwa cheChirungu chatanga musi waNdira 27, 2003.
Vanhu vakawanda vanoterera Studio7 vati inhepfenyuro iyi inokoshesa mashoko echokwadi mukutepfenyura kwayo isina divi rainorerekera.
Mumwe mutereri weStudio 7, VaMoyowatidhii Angirayi, varumbidza nhepfenyuro iyi vachiti inotepfenyura zvine hunyanzvi pamwe nekubudisa mashoko echokwadi.
VaAngirayi vatiwo mune ramangwana vangafare zvikuru kana Studio7 kaitawo chivhitivhiti muZimbabwe.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa-Zimbabwe, kana kuti MISA-Zimbabwe, VaTabani Moyo, vatiwo nhepfenyuro iyi inobatsira zvakanyanya zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviite sarudzo mushure mekuwana ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika.
VaMoyo vatiwo apo nyika iri kunetsekana nedenda reCovid-19 vanoda kuti Studio 7 irambewo ichipakurira veruzhinji ruzivo nedzidziso.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vatendawo Studio7 vachiti yabatsira budiriro munyika kuburikidza nekutepfenyura isina kwayakarerekera uye ichibuditsa pfungwa dzemunhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika raanotsigira.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Va Nick Mangwana, vanoti vabuda panhepfenyuro iyi kakawanda. VaMangwana vatiwo Studio7 inhepfenyuro inoshanda zvakanaka ichiremekedza zvinotarisirwa kubva kuvapepeti venhau.
VaMangwana vati hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa yakabvumidza kuti nhepfenyuro iyi ishande zvayo yakasununguka munyika vakatiwo vanofadzwa nekuti nhepfenyuro iyi yakapa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Chirongwa cheStudio7 Shona, icho chakaparurwa pamwe chete nechirongwa cheStudio7 Ndbele, chakatanga kutepfenyura musi wa 7 Kubvumbi mugore ra2003 vashamarari vari muchakabvu Carol Gombakomba naChampion Chigwedu, mupepeti mukuru ari Ray Choto.
Vatori venhau muZimbabwe vaisanganisira Blessing Zulu, Rashweat Mukundu, muchakabvu Tendai Ndemera, Michael Kariati, Godwin Mangudya, Loirdham Moyo, Thomas Chiripasi, Praxedes Jeremiah, Brenda Moyo, uye Basildon Peta ari muSouth Africa.